Zininzi umahluko kwimisebenzi ye-grinder ye-pepper, sazisa amanqaku ambalwa aqhelekileyo okuhlalutya indlela yokukhetha kwimisebenzi. 1. Ukukhethwa kwezinto eziphambili xa kuthengwa i-grinder ye-pepper, eyona nto ibaluleke kakhulu yinto yempahla yemveliso. Okwangoku, izinto eziqhelekileyo zenziwe nge-iron, i-stainless steel kunye ne ceramic. Ukuba ufuna ukuyisebenzisa ekhitshini eshushu kwaye enomswakama, intsimbi engenasici ekungekho lula ukuyirusa lukhetho olufanelekileyo, kwaye inokusetyenziselwa ukugaya ityuwa yamatye ....Funda ngokugqithisileyo »
Ipepile inokuthiwa sisinongo esibaluleke kakhulu kwiitya ezininzi. Ukuba une-grinder eluncedo ye-pepper, unokusebenzisa ngokulula ipepile entsha engaphezulu ukongeza incasa kwizitya zakho. Ungazikhetha njani iimilo ezahlukeneyo kunye namandla? Ubume besingqisho sepelepele 1. Uhlobo lwencwadi ejijekileyo Abantu abakuthandayo ukupheka bayasithanda isandi esimnandi xa ipepile inyongwe ngayo, kunye nevumba eliza nayo. Kuyinto enobungcali ukusebenzisa! Nangona kunjalo, olu hlobo lwepeppe ...Funda ngokugqithisileyo »
I-Peugeot ngenene yifani yesiFrentshi. Usapho lakwaPeugeot lwaqala ukuvelisa izinto zokugaya ezahlukeneyo ngexesha lenkulungwane ye-18. “Inkampani yakwaPeugeot” evelise la shaker yenza abantu abaninzi badideke kancinci ngenxa yegama leFrench Peugeot Motor Company. Kuyafana ncam. Ngapha koko, zombini i-Peugeot pepper shaker kunye neemoto zePeugeot zezenkampani enye. I-Peugeot yayiyeyokuqala ukuvelisa izixhobo zokusila zepepile. Akukho mntu wayecinga ukuba le nkampani yayiza kwenza iimoto ngelo xesha. Intsapho yakwaPeugeot ityale imali ekuveliseni ngaphezulu kweminyaka engama-200. Iminyaka kade ...Funda ngokugqithisileyo »